Fanontam-pirinty lehibe, milina fanaovana amboradara, mpanapaka fanapahana - YINGHE
Digital Printer format lehibe
Laser Engrver Ary Cutter
Masinina famoahana hafanana hafanana
Milina fanaovana album
Masinina fonosana sy fonosana
Tantaran'ny YINGHE sy ny fomba fandraharahana: YINGHE ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD no fivarotana fivarotana enta-mavesatra tokana ao an-toerana izay manana orinasan-tserasera e-varotra e-varotra iraisam-pirenena. ny orinasanay dia naorina tamin'ny taona 2002, taorian'ny taona maro nivoaran'ny fampandrosoana, YINGHE dia lasa fitaovana teknolojia avo lenta malaza eto an-toerana sy any ivelany an'ny orinasa maoderina, ny ambaratongan'ny orinasa, ny vokatra sy ny serivisy ao amin'ny firenena dia faharoa. Ny vokatray dia amidy amina firenena mihoatra ny 200 sy faritra eto amin'izao tontolo izao.
Ahoana no hitazomana ny lohan'ny mpanonta?
Amin'ny maha singa fototra an'ny milina fanontam-pirinty, ny fahamarinan-dohan'ny loha fanontana dia mamaritra ny kalitaon'ny masinina. Raha somary avo ny vidin'ny raikitra amin'ny fanontam-pirinty, ny fomba fanitarana ny androm-piainan'ny lohan'ny fanontam-pirinty, hampihena ny vidin'ny fanoloana sy ny ambaratongan'ny akanjo, ary hitazomana tsara ny loha fanontana.
Inona no mahasamihafa ny rano-base ...
Ny ranomainty miorina amin'ny solika dia ny fanalefahana ny loko amin'ny solika, toy ny menaka mineraly, menaka legioma, sns. Ny ranomainty miorina amin'ny rano dia mampiasa rano ho mpanelanelana amin'ny fanaparitahana, ary ny ranomainty dia eo amin'ny mpanonta fanontana Ny pigmentera dia miraikitra amin'ny ...
Tombony efatra amin'ny piezoelectric inkjet p ...
Araka ny fantatsika rehetra, ny teknolojia inkjet thermal foam dia nanjaka tamin'ny tsenan'ny mpanonta inkjet lehibe nandritra ny taona maro. Raha ny marina, ny teknolojia inkjet piezoelectric dia nanangana revolisiona tamin'ny teknolojia inkjet. Efa ela no nampiharina tamin'ny mpanonta birao. Miaraka amin'ny fanatsarana sy fahamatorana ...